DF Soomaaliya oo war cusub ka soo saartay shirka Dhuusamareeb | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta DF Soomaaliya oo war cusub ka soo saartay shirka Dhuusamareeb
Sii hayaha wasiirka Dastuurka Soomaaliya, Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa ka hadlay arrimo ku aadan qabsoomida shirka la filayo in 15-ka bishan August uu ka dhaco gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug.
Wasiirka ayaa sheegay in haatan ay socoto qaban-qaabadii ugu dambeysay ee shirkaasi oo ay isku arki doonaan madaxda dowladda dhexe, kuwa dowlad goboleedyada iyo saamileyda siyaasadeed ee dalka.
Sidoo kale Saalax Axmed Jaamac oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in maamulada Jubbaland iyo Puntland ay weli ka biya diidsn yihiin ka qeyb-galka shirkaasi, balse wuxuu tilmaamay inay haatan socdaan dadaallo lagu qancinayo maamulladaasi.
Wasiirka Dastuurka ayaa carabka ku goday in dadaalladaasi ay hormuud ka yihiin madaxweynayaasha maamullada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo ku sugan gudaha magaalada Muqdisho.
Ugu dambeyn wuxuu shaaciyey in kulamo goono gooni ay ka socdaan caasimada, kuwaas oo looga tashanayo qabsoomida wejiga saddexaad ee shirka magaalada Dhuusamareeb.
Shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa diirada lagu saarayaa xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha doorashada ee 2020/2021, balse wuxuu ku soo aadayaa, iyadoo dhowaan la riday xukuumaddii hore ee ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre.
Previous articleXildhibaan Sacdiyo “Dowlad aan Bakaaro xataa tagi karin sidee doorasho qof iyo cod ah…
Next articleVilla Somalia oo u yeertay Cawad kadib magacaabidii sharci-darrada ahayd (Xog)